September 2016 - Page 2 of 31 - Sawirrotv
Dowladda Federaalka oo Warsaxaafadeed ka soo Saartay Weerarkii Maraykanka uu ku Qaaday Ciidamada Galmudug (Akhrisso)
September 29, 2016 – Golaha wasiirada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta si adag uga hadlay duqeyntii habeen hore ay ciidamada Mareykanka ay ku qaadeen Maamulka Galmudug, iyagoona walaac ka muujiyay sheegashada Puntland ee ku aadan duqeynta ka dhacday duleedka Gaalkacyo. War qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska Ra’iisul Wasaare Kuxigeenka dalka, Maxamed …
Shiikh Shariif iyo Badda Soomaaliya (VIDEO)
Shiikh Shariif Sheekh Axmed ayaa iska fogeeyay heshiiskaasi, sheegay inuusa waxba ka ogeyn Heshiiskaasi, islamarkaana xumaantiisa iyo samaantiisa wixii ka soo baxa wax laga weydiinaayo Ra’iisul Wasaarihii xilligaasi iyo Wasiirkii Saxiixay Heshiiskaasi. Madaxweynihii hore ee Dowladii KMG aheyd Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in sababta xilligan doorashooyinka loogu soo aadiyay dooda badda ay tahay arimo …
Ex. Madaxweyne Shiikh Shariif oo Iska Fogeeyay iibsigii Badda Soomaaliya (VIDEO)
September 29, 2016 – Madaxweynihii hore ee Dowladdii KMG ahayd ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed ayaa wuxuu markii ugu horeysay ka hadlay Heshiiskii is afagaradka ahaa sanadkii 2009 dhexmaray Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya, isagoo Shiikh Shariif uu waagaasi ahaa madaxweynaha dalka. Shiikh Shariif Sheekh Axmed ayaa iska fogeeyay heshiiskaasi, sheegay inuusa waxba ka ogeyn Heshiiskaasi, …
Askari Kenyan ah oo ay Qafaasheen Ururka Al Shabaab oo la soo Bandhigay (VIDEO)
September 29, 2016 – Ururka Al Shabaa ayaa soo bandhigay askari kenyan ah oo maxbuus ahaa ay ugu haystaan gudaha dalka Soomaaliya, askarigani ayaa sida uu sheegay lagu soo qabtay dagaalkii ka dhacay Degmada Ceelcadde ee Gobolka Mudug 15-kii Bishii January ee sanadkan. Ninkan oo magaciisa ku sheegay Loanard Maingi Kiiyo, ayaa laga soo duubay muuqaal …
Muuqaalkii Askariga Kenyaanka (VIDEO)
Askarigan oo magaciisa ku sheegay Loanard Maingi Kiiyo, ayaa laga soo duubay muuqaal Video ah oo Shabaab ay soo bandhigeen, waxaana uu ka hadlay Shaqada uu ka hayay gudaha ciidanka Kenya. Al Shabaab ayaa sidan oo kale maalintii talaadada ahayd soo bandhigtay muuqaalka askari u dhashay dalka Uganda oo ay isaguna maxbuus ahaan ugu haystaan …
Dowladda Maraykanka oo ka Hadashay Weerarkii Lagu Qaaday Ciidanka Galmudug ee Deegaanka Jeexdin (Dhagayso)
September 29, 2016 – Dowladda Maraykanka ayaa markii u horaysay ka hadashay weerar la sheegay in ciidamadoodu ay ku qaadeen xarun ay ku sugnaayeen ciidan ka tirsan maamul goboleedka Galmudug oo ka arimiya bartamaha Soomaaliya. Hadaba afhayeen u hadlay waaxda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Jeff Davis, ayaa shir jaraa’id oo uu xalay …
Weerarkii Galmudug iyo Maraykanka (VIDEO)
Wasiirka Amniga ee Maamulka Galmudug, Cismaan Ciise Nuur (Taardhuleed), ayaa si adag Maamulka Puntland ugu eedeeyay in warbixin khaldan uu siiyay ciidamada Mareykanka. Bannaanbaxayaasha isu soo baxay ayaa wadooyinka ku gubay taayeero, iyagoona si kulul u cambaareeyay duqayntaasi, oo ay ku sheegeen inay iska kaashadeen Ciidamada militeriga Puntland iyo kuwa Mareykanka.
Banaanbax Looga soo Horjeedo Weerarkii Maraykanka uu ku Qaaday Ciidanka Galmudug oo ka Dhacay Gaalkacyo (VIDEO)
September 28, 2016 – Waxaa Magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug maanta ka dhacay bannaanbax balaaran oo looga soo horjeedo weerarkii dhinaca cirka ahaa ee xalay waqti danbe lala beegsaday Ciidamada Maamulka Galmudug oo sheegay inay deegaanka Jeexdin ay isku hor fadhiyeen ciidanka maamulka Puntland. Bannaanbaxayaasha isu soo baxay ayaa wadooyinka ku gubay taayeero, iyagoona …
Puntland iyo Galmudug oo Isku Adeegsaday Diyaaradaha Dagaalka ee Dalka Maraykanka (Dhagayso)(SAWIRRO)
September 28, 2016 – Duqayn yaab badan ayaa waxa ay xalay saqdii dhexe ka dhacday galbeedka magaalada gaalkacyo ee gobolka Mudug, xilli ay halkaasi isku horfadhiyaan laba ciidan oo kala taabacsan Maamulada Puntland iyo Galmudug. Warar dheeraadka ah ee ka soo baxaya Duqeyntii xalay iyo Dagaal saaka aroortii ka dhacay duleedka Magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka …